Europe nwere a ụfọdụ oyi amara n'oge oyi ọnwa na-n'adịghị ka ọ bụla ọnọdụ na ụwa. E nwere ọtụtụ nke dịgasị iche iche, na ọ dịghị abụọ ebe nwere otu mmetụta na ikuku. N'ezie, ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu na obodo na obodo n'oge…
Njem na a ụtọ eze, tinye uche! Ị nwere ike ọ gaghị na-eche na-eme njem site na Europe dị nnọọ n'ihi na-agbalị si desserts, ma ị ga-. Europe nwere ụfọdụ mma nri pụrụ iche nke ga-ewetara gị nso ka omenala nke mba ị na-ịgagharị….